Nikolai Nekrasov मुख्यतया को बहुमत संग सम्बन्धित छ रूस बारेमा कविता। अनन्त क्षेत्रहरू, धूल सडक, किसान जीवनको कठिनाइ - यो सबै आफ्नो गीत प्रतिबिम्बित र सारा Nekrasov छ। "Panaevskom चक्र" - Avdote Panaevoy - कविता को सूची, परिचित हामीलाई सबै विषयवस्तुहरू ध्यान भंग, यो एउटा वास्तविक प्रेम कविता, को कवि पत्नी समर्पित छ हरेक लाइन जो हुनत नागरिक हो। आफ्नो सम्बन्ध कठिन थियो, तर यो तिनीहरूलाई बारेमा कुरा गर्न असम्भव छैन भनेर रोमाञ्चक छ।
1842 मा, भाग्य जवान निकोलस र Avdotya Panayev, née ब्रियान्स्क, को सांसारिक दल एक ल्याए। "तपाईंले सधैं धेरै राम्रो हुनुहुन्छ" - पछि नयाँ ज्ञान को कवि लेखे। यो थियो पहिलो नजर मा प्रेम, र कुनै आश्चर्य: Avdotya, जवान राम्रो-देख, मा साहित्य प्रतिभाशाली थियो। त्यो समाजमा राम्रो, यसको सुशील सैलून सबैभन्दा venerable सेन्ट पीटर्सबर्ग लेखकहरूले एक असंख्य आकर्षित लाग्यो। यसबाहेक, Panaeva, प्रशंसक को विशाल संख्या बावजुद, तिनको पतिको सम्पूर्ण समर्पित, उहाँले बारी मा, असल बेहोरा र उदाहरणीय व्यवहार फरक थिएन तापनि थियो।
Avdotya को हिज्जे अन्तर्गत पनि Fyodor Dostoevsky पायो, तर Panaeva सम्बन्ध विकास गर्न अनुमति छैन। निस्सन्देह, Nekrasov मदत गर्न सकिएन तर आफ्नो भाग्य elated। र बस उसलाई अघि धेरै जस्तै, त्यो एक बेलेम इन्कार थियो। लगभग आफ्नै जीवन svol गीतकार प्रेम तथापि, यसलाई बन्द गर्न असफल भयो।
तर जाहिर छ, यो भाग्य पनि कवि र आफ्नो सरस्वती सँगै थिए चाहन्थे। चार वर्ष पछि Nekrasov फेरि आफ्नो भावना स्वीकार, तर यो समय Avdotya उहाँलाई जवाफ दिए। प्रेम गीत Nekrasov सुरु के - "। Panaevskom चक्र" निकोलस र Avdotya एक नागरिक विवाह मा प्रवेश, तर साधारण छैन - तिनीहरूले घर Panaeva बस्थे यसबाहेक, इवान Panaev आफ्नो संघ को एक प्रत्यक्ष सहभागी थियो - त्यही "Cupid डे TROIS", परिवार Brik संग आधा शताब्दीमा Mayakovsky पछि पटक-पटक थियो।
1849 मा, कि थप तीन वर्ष मा, जेठो Nekrasov र Panaeva जन्म भएको थियो छ। दुर्भाग्यवश, केटा लामो बाँच्न किस्मत थिएन। जो आफ्नो प्रेम सबै यो असामान्य बलियो महिला लागि प्रतिबिम्बित कविता, सूची - अझै यो Nekrasov "Panaevskom चक्र" सिर्जना यस कठिन समयमा थियो।
1848 मा, "समकालीन" - Nekrasov को सम्पत्तिको मा यसको गिरावट को फलस्वरूप कायापलट Aleksandra Sergeevicha Pushkina को brainchild, - गहिरो संकट मा छ। Censorial नियन्त्रण पाठक बस केही थियो आकर्षित गर्न, भौतिक को एक ठूलो रकम छुट्यो। यस कवि संग प्रसिद्ध पत्रिका को पुनरुद्धार, सँगै काम र Avdotya। यो प्रकाशन समावेश थियो जो काम, सच्याउन मद्दत गर्छ, प्रकाशनको लागि आफ्नो छोटो कथा एक नम्बर सुझाव। त्यो यो समर्पित Nekrasov "Panaevskom चक्र" (प्रेम बारे कविता को सूची) बिल्कुल छैन उनको लागि आकस्मिक छ कि न्याय गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो महिला यस्तो उपचार योग्य हुनुहुन्छ।
प्रेम कविता Nekrasov - "Panaevskom चक्र" - यो पनि कवि र आफ्नो सरस्वती प्रेम को सारा कहानी बताएको अन्त गर्न सुरुदेखि एक वास्तविक पुस्तक, छ। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य लागि बनाइने, तर शान्ति सकिनँ बस्न देखिन्थ्यो। स्थिर quarrels र संघर्ष, अनन्त भ्रष्टाचार, जो गम्भीर हल्लाइन्छ स्वास्थ्य Nekrasov एक बच्चा, को मृत्यु - यो सबै परिवारको आनन्द योगदान छ कि छैन असम्भाव्य छ। Panaeva र Nekrasov निरन्तर parted र फेरि सँगै आए। एकाकीपनको कवि को क्षणमा उहाँले कविता लेखे र उनको संग्रहालय, उदाहरणका लागि, र धेरै अन्य "भारी क्रस उनको शेयर पायो" जो बीच, बढी। त्यसपछि Panaeva फर्के र फेरि संयुक्त रचनात्मकता र भावुक प्रेम भरिएको एक हप्ताको थाले।
सबैभन्दा गम्भीर quarrels एक मध्य-अर्द्धशतकको देखा पर्यो, तर चाँडै Avdotia पहिले नै उहाँले आफ्नो रोगबाट एक व्यवहार तरिकाहरू देख थियो जहाँ युरोप, मा कवि संग यात्रा। "हामी मूर्ख मान्छे हुनुहुन्छ", - उहाँले साँच्चै प्रेम महिला अपमान गर्न चाहँदैनथे, को Lyric लेखे, र आफ्नो कविता मा लगे।
"यो तिमीलाई लामो अस्वीकार गरिएको" - कविता अन्तिम चक्र को एक। लगभग बीस वर्ष - कहानी Panaeva Nekrasov को पहिलो भाग र प्रारम्भिक sixties मा समाप्त भयो। तिनीहरूले झन् एक लामो समयसम्म निराशा फसे र कार्ड तालिका समय बिताए, जसले घाँटी रोग बाट पीडित थियो कवि, पाठ्यक्रम, धेरै को, तर हाल को वर्ष मा गरिएको छ। Avdotya पहिलो पत्नी देखि बच्चाहरु गुमाए, र Nekrasov द्वारा, र चाँडै मृत्यु र इवान आफूलाई यो सबै तिनीहरूलाई एउटा लामो समय भएको छ कि Panaev। र यसलाई परिवर्तन गर्दैन यस्तो लामो समय को लागि असम्भव छ।
त्यो जो Nikolai Nekrasov आफ्नो गीत रूपमा थकित र थकित, कहिलेकाहीं भ्कगडालु, capricious देखा मा, एक पटक यस्तो लेखे "तपाईंले सधैं धेरै राम्रो हो", अब छ। प्रत्येक लाइन मा गीत, थप उदास र निराशावादी भयो शब्द शाब्दिक यो भोल्टेज oozed। सबै 1863 मा समाप्त Avdotya Panaeva एक पटक र सबै को लागि कवि बाँकी हुँदा।
एक समय पछि Nekrasov खेल्न रूसी Mikhailovsky थिएटर, फ्रान्सेली भेटे। प्रकाश र स्वतन्त्रित, पुतली जस्तै, अभिनेत्री आफ्नो शिर कवि भताभुंग गरियो। यो उहाँलाई सजिलै Panaeva देखि अलग बाँच्न अनुमति के हो भनेर सम्भावना छ। तर यी सम्बन्ध ढिलाइ छैन। एक पटक, अभिनेत्री त्यो कवि विदेश बाँच्न चाहेनन् जबकि, छैन जाँदै छ रूस उत्प्रेरित बताए।
उहाँले Fokloy Anisimovna, एक सरल गाउँमा केटी आफ्नो Galatea भइन् भेटे पछि। यो एक नयाँ दिने नाम (Zinaida Ivanovna), उहाँले उनको शिष्टाचार को मूल कुराहरू सिकाउनुभयो, सार्वजनिक मा व्यवहार कसरी देखाए, उसलाई लाग्यो जहाँ उहाँले सकेजति, एक अशिक्षित केटी बित्तिकै यो नयाँ संसारमा सम्भव accustomed रूपमा गर्न। यो कवि आफ्नो sweethearts सबै धेरै प्रकारको थियो; उहाँले तरिका अनुकूल सम्बन्ध कायम गर्न प्रयास, आर्थिक तिनीहरूलाई मदत गरे। अझै हामी कविता "तीन Elegies" शीर्षक लागि प्रतीकात्मक छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सन हुँदैन, त्यो Panaeva समर्पित र अरू कसैको।
यस कवि संग पहिलो पति को मृत्यु र ब्रेक पछि Avdotia फेरि विवाह गरे। तर हाय, यो सम्बन्ध मा आनन्द पाउन किस्मत थिएन - नयाँ विकल्प रूपमा पान रूपमा Mischievous थियो। यो विवाहमा त्यो उनको जुटाउने सम्पूर्ण बायाँ, एक छोरी जन्म दिए, र त्यसपछि उनको पति पूर्व Panayev गरिब छोडेर अन्य विश्व लागि बायाँ। यो रोटी Avdotia टुक्रा कथाहरू लेखेर कमाएको भन्ने ज्ञात छ, तर त्यो एक धेरै, धेरै मार्फत जाने थियो - Nekrasov गर्न उपन्यास अझै पनि यसको प्रतिष्ठा मा एक गाढा दाग बाँकी।
तर्क ती जो अन्य मा एक ठूलो प्रभाव थियो, यो धेरै गाह्रो छ। अर्कोतर्फ, Nekrasov अर्को महिला को लागि "Panaevskom चक्र" (पद सूची प्रेम र adoration संग गर्भवती छन्) यस्तो लेखे थियो? उहाँले कुनै कम प्रतिभाशाली लेखक को स्थिर समर्थन बिना कवि रूपमा बुझे सकिएन?
कारण Avdotya उहाँले उत्तरार्द्ध दुई अवस्थामा ती दिनमा अत्यन्तै स्वागत छ एक महत्वपूर्ण भूमिका आकर्षण गीत लोकतन्त्र, खेल्छ हुनत, Turgenev, Panaeva केही मुद्दा जोडिएको छ जो, र टोलस्टोय र Ostrovsky संग quarreled। तर कविता "तीन Elegies" त्यसैले लाक्षणिक गीतकार सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास कोसँग महिला संख्या देखाउँछ छ, त्यो Panaeva समर्पित। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले Nekrasov सबै मेरो जीवन उनको प्रेम भन्छन्। "एक भारी पार उनको साझेदारी गर्न प्राप्त गर्न," गरौं तर तिनीहरूले साथ ल्याए।
बच्चाहरु Pushkin। मारिया, अलेक्जेन्डर, Grigory Pushkin र नतालिया को संक्षिप्त जीवनी
Lermontov मा युद्ध को विषय। युद्ध बारे Lermontov गरेको काम
सर्गेई Tretyakov - एक प्रतिभाशाली कवि र futurist
भागहरु को chrome चढाना। मास्को मा भागहरु को chrome चढाना। सेन्ट पीटर्सबर्ग मा भागहरु को chrome चढाना
Cupcakes लागि नुस्खा "दूध रेशम"